Maitiro ekuratidza kana kuviga iyo iCloud application pane yedu iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuratidza kana kuviga iyo iCloud application pane yedu iPhone
Vashandisi veICloud vagara vachidemba kusave nechikumbiro pane iyo iPhone kuti vawane zvinyorwa zvese zvatakachengeta muApple gore. Kunyange chiri chokwadi kuti mashandiro haana chekuita nemamwe masevhisi ekuchengetedza, kwatinogona kuteedzera chero faira, chinhu chakanaka nezveICloud (sekutaura) Iyo inosanganisa mafaera akagadzirwa nemaapplication akasiyana atakaisa mumafoldaNenzira iyi, kana tichida kutsvaga zvinyorwa zvese zvakaongororwa nechishandiso, isu tinongofanirwa kuenda kufolda iyoyo.
Mukana wakakura watinopihwa naICloud ndewekuti tinogona tsvaga zvinyorwa zvese uye mafaera kubva kune chero chishandiso kuti isu takazvichengeta uye nekuzvigadzirisa nekukurumidza kuitira kuti shanduko dzishandurwe kana tavhara iyo application, tisingafanirwazve kurodha mafaira akashandurwa kana magwaro, sekune mamwe mabasa ekuchengetedza gore.
1 Ratidza kana kuvanza iCloud Drive pane yedu iPhone
2 Nei uchigonesa?
Ratidza kana kuvanza iCloud Drive pane yedu iPhone
Nekusvika kweIOS 9, Apple inotipa mukana, kana tikashandisa sevhisi iyi, ku ratidza nzira pfupi kumafaira edu zvakananga kubva kubhodhi ye iPhone yedu. Nokusingaperi, ichi chiratidzo chakavanzwa, asi pazasi tinokuratidza kuti chingashandiswe sei.
Tinotungamira kumusoro Zvirongwa uye tinya pane sarudzo ICloud.
Mukati meICloud tinya pane yekutanga inowanikwa sarudzo inonzi iCloud Drive.
Tevere, isu tinotanga tawana iyo iCloud Drive sarudzo iyo inotibvumidza isu kuchengetedza zvinyorwa uye data muICloud. Iyi tebhu inofanirwa kuve inogoneswa kushandisa iCloud. Chechipiri tinowana Ratidza pahwindo repamba. Kana isu tichida kuve neakananga kuwana pane yedu yekumba skrini isu tinofanirwa kuve nebhokisi iri rakamiswa.
Kana isu tajaira kushandisa iCloud uye nekuda kwekudzikiswa kwemutengo iyo Apple yakatiratidza mwedzi mishoma yapfuura, isu tinongoshandisa sevhisi iri mugore zuva nezuva, shandisa ino icon inotibvumidza kuti tikurumidze kuwana magwaro izvo zvatakazvichengeta nekuzvishandura mumasekondi mashoma tisina kumbodzosera zvakare kana tazvigadzirisa, sekutaura kwandamboita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekuratidza kana kuviga iyo iCloud application pane yedu iPhone
Apple inoburitsa tvOS 9.1.1 neyemuno maPodcasts app
Activator yakagadziridzwa kuita vhezheni 1.9.8 ine yakakosha nhau